मान्छेको देहान्त पछी कसरी निस्किन्छ शरीरबाट आत्मा ? के हुन्छ मृत्युपछि ? यसो भन्दा पुराण
हिन्दु धर्ममा मृत्युपछि गरुड पुराण सुन्ने परम्परा छ । यस पुराणमा भगवान् विष्णुले आफ्नो वाहन गरुडलाई मृत्युसँग सम्बन्धित अनेकौं गोप्य कुरा बताउनुभएको छ ।
मृत्युपछि जीवात्मा कसरी यमलोकतिर जान्छ भन्ने कुराको विस्तृत वर्णन गरुड पुराणमा गरिएको छ । पढ्नुहोस्, गरुड पुराणका केही रोचक तथ्य :
उता आमाको शरीर जलिरहेको थियो यता छोराको मन ! आमालाई दागबत्ती दिएपछि रवि ओड एकोहोरो भए…(भिडियो)